एजेन्सी, २२ वैशाख । एचएमडी ग्लोबलले गत वर्ष अन्तराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो फिचर फोन नोकिया २२० फोरजी सार्वजनिक गरेको थियो । लामो प्रतिक्षापछि कम्पनीले यो फोन चीनको बजारमा पनि लन्च गरेको छ ।
चीनमा मे ७ देखि यो फोन सेलका लागि उपलब्ध हुनेछ । यो फोनले फोर जी नेटवर्कलाई सपोर्ट गर्नेछ । तर फोनले थ्री जी नेवर्कलाई भने सपोर्ट गर्ने छैन । यसमा भएको ब्याट्रीले ६ घण्टासभन्दा धेरै टकटाइम र २७ दिनभन्दा धेरै स्ट्याण्डबाइ टाइम दिन्छ ।
नोकिया २२० फोरजी चीनमा आरएमबी २९९ अर्थात् करिब ४, ८०० रुपैयाँ पर्नेछ । फोनको प्रि बुकिङ सुरु भइसकेको छ । इच्छुकहरुले यसलाई चिनियाँ वेबसाइट जेडी डट कमबाट खरिद गर्नसक्ने छन् । प्रिबुकिङ पछि फोनको सेल्स ७ मेदेखि सुरु हुनेछ । यो फोन ब्ल्याक र ब्ल्यु कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ ।
यो फोनमा फोरजी सपोर्टको साथमा भोल्टे सपोर्ट पनि रहेको छ । यो फोन क्लासिक पोलिकार्बोनेट बडीबाट बनेको छ । फोनमा २.४ इन्चको डिस्प्ले रहेको छ । यसमा फोटाग्राफीका लागि एलईडी फ्लैशको साथमा ०.३ मेगापिक्सल्सको क्यामेरा रहेको छ । फोनमा कनेक्टिभिटीका लागि ब्लूटुथ ४.२ को सपोर्टिभ फिचर पनि रहेको छ ।
नोकिया २२० फोरजी फिचर फोनमा १२०० एमएएचको को नन रिमूभेबल ब्याट्री रहेको छ । यो फोनमा १६ एमबीको रैम र २४ एमबीको इन्टरनल एक्सटेन्डेबल मेमोरी रहेको छ ।
अन्य फिचरको कुरा गर्दा यसमा माइक्रो युएसबी पोर्ट रहेको छ । ३.५ एमएम हेडफोन ज्याक रहेको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप यसै वर्ष आउन सम्भव छ: एस्ट्राजेनेका
के तपाईलाई थाहा छ एलियनबारे यी रोचक तथ्य ?
यसरी पाँच मिनेटमै बढाउनुहोस् वाईफाईको स्पीड
कम्प्युटरका उपयोगी सट्कट, दुई गुणा छिटो हुन्छ काम
तपाईंलाई मोबाइल चार्ज गर्न आउँछ ? थाहा पाउनुहोस् ८ टिप्स्
टिकटकका निर्देशकले दिए राजीनामा
युट्युबले यसै वर्ष हटायो एक करोड १४ लाख भिडियो
टिकटकका सीईओ केभिनले दिए राजीनामा
हङकङका युवकमा ४ महिनापछि पुनः कोरोना संक्रमण, कोरोना दोहोरिएको पहिलो घटना
चिनियाँ प्रविधिप्रति चौतर्फी आक्रमण, अब निशानामा विच्याट
इजरायलका ३ वैज्ञानिकले बनाए कोरोना परीक्षणको स्मार्ट तरिका
सामाजिक सञ्‍जालमा बढ्‍दो ठगी धन्दा, कसरी बच्‍न सकिन्छ ?
अमेरिकी विज्ञहरुको प्रतिक्रिया-टिकटक र विच्याटमाथिको प्रतिबन्ध महत्वपूर्ण कुरा होइन